Akụkọ - Gini mere na-ehichapụ ọgwụ nje anaghị alaghachi
Ọ bụ ezie na akwụkwọ mposi anaghị alaghachi na shelf ebe ọ bụ na ụjọ ịzụrụ ụbọchị mbute ọrịa na ọnwa Machị, nhichapụ disinfectant ka dị ụkọ.
Manufacturinglọ ọrụ na-emepụta akwụkwọ akwụkwọ Procter & Gamble nke Pennsylvania enwetabeghị ụkọ akụrụngwa n'ihi na pulp ya sitere na North America na Latin America.
Ma Ọgbọ nke asaa, onye na-emepụta ihe nhicha na nhicha na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ahụwo ndọtị ngwongwo nke nhichapụ disinfectant n'ihi asọmpi ya na ndị na-emepụta PPE maka otu ihe ahụ.
Naanị izu gara aga, onye na-elekọta CNBC "Mad Money" bụ Jim Cramer mere mkpesa na Twitter banyere enweghị ike ịchọta ngwaahịa Lysol na New York. Achọ maka akwụkwọ mposi na nke nhicha na-adị elu, mana gịnị nwere ike ịkọwa ọdịiche dị na ọkwa ha nke ịlaghachi azụ?
Akwụkwọ mposi adịghị enwe ụkọ akụrụngwa
Ọ bụ ezie na ndị na-azụ ahịa nọ na-ehichapụ shelf nke akwụkwọ mposi na mbido ụbọchị ọrịa ahụ na-efe efe, ịba ụba ụba bụ usoro dị mfe. Ka ọ na-erule Eprel, Procter & Gamble's Mehoopany, Pennsylvania nkewa akwụkwọ osisi "na-edekọ ego Charmin na Bounty, karịa ihe anyị merela na akụkọ ihe mere eme nke P&G," ka Jose de los Rios, onye ndu gburugburu ebe ahụ kwuru. Plantlọ osisi Mehoopany, nke kpuchiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ụkwụ abụọ, bụ nnukwu ụlọ ọrụ P & G na US ma na-eje ozi ihe dị ka ọkara nke ndị bi na United States, na-elekwasị anya na Northeast.
Mkpụrụ osisi Mehoopany echeghị nrụgide akụrụngwa n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ na-enweta ọtụtụ pulp ya site na North America na Latin America. Ọzọkwa, ịrị elu nke na-achọ anụ ahụ mere ka ọ pụta ìhè site na njupụta na-achọ ngwaahịa ndị ọzọ na-enweta pulp, dị ka akwụkwọ ọrụ ọfịs, n'ihi atumatu ọrụ sitere n'ụlọ na-arụ ebe niile.
Ọ bụ ezie na P&G nwere ike ịbawanye mmepụta akwụkwọ ya, ịme ya adịghị mfe dịka ịgbakwunye igwe akwụkwọ. Ọ bụ ezie na igwe ndị dị ugbu a adịworị nso na ọnụego mmepụta 100%, dị ka de los Rios si kwuo, ịzụta igwe ọhụrụ abụghị ihe ngwọta ga-arụ ọrụ. Ndị a bụ ego dị oke ọnụ nke $ 250 ma ọ bụ karịa, na usoro site n'inye iwu iji nweta ikike ikikere ziri ezi na gburugburu ebe obibi na ịmalite ịmalite imepụta nwere ike were afọ abụọ.
Kama nke ahụ, P&G ejirila igwe dị ugbu a rụọ ọrụ site na mbenata mmemme downtime na mgbanwe mgbanwe. O meela ka "edozi" usoro ya iji lekwasị anya na ngwaahịa ndị ahịa na-achọkarị, dị ka Rick McLeod si kwuo, osote onye isi oche nke ngwaahịa maka P&G Family Care. McLeod kwukwara na ya kwenyere na ụlọ ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma ogologo oge n'ihi mgbanwe ndị a.
Ochicho nke ngwaahịa dika Bounty na Charmin ka di “niru” n’elu, dika McLeod kwuru. Mana nbudata mkpesa akwụkwọ mposi na-egosi na ụlọ ọrụ dịka P&G enwewo ike ịzaghachi afọ ojuju.
Nloghachi nke ọgwụ nje ga-abụ 'ụzọ ka toro ogologo'
N'ụzọ dị iche, ndị na-azụ ahịa ka na-eme mkpesa banyere enweghị ọgwụ disinfectants, ọkachasị na-ehichapụ ọgwụ.
Ndị na-emepụta ngwaahịa na-ebugharị ngwa ahịa, mana ọ nwere ike ezughi. Na Mee 2020, onye isi oche na onye isi oche Clorox Benno Dorrer kwuru na ụlọ ọrụ ahụ ejirila 40% mụbaa ngwaahịa nke ọgwụ nje, mana mkpa nke ụfọdụ ndị na-egbu nje ebiliwo 500%. Ego Lysol rutere karịrị 50% na nkeji nke mbụ nke 2020, mana ụlọ ọrụ nne na nna ya bụ Reckitt Benckiser gara n'ihu na-agbalite mmepụta iji mezuo nnukwu ọchịchọ.
Oghere ahụ dị maka ndị egwuregwu pere mpe na ụlọ ọrụ ahụ. Ọgbọ nke asaa, onye na-emepụta ihe nhicha na nhicha na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ewepụtalarị 63% karịa ngwaahịa na ọkara mbụ nke 2020 karịa na 2019, mana ọchịchọ chọrọ 300-400%, dị ka onye isi oche nke ọkọnọ Jim Barch si kwuo.
Nnukwu snags ndị dị na ngwongwo ọkọnọ abụwo n'ezie na-ehichapụ ọgwụ, "ka Barch kwuru.
Nke ahụ bụ n'ihi asọmpi na akụrụngwa nchedo onwe onye (PPE), dị ka Barch si kwuo. A na-ejikwa polyester spunlace Ọgbọ nke asaa na-ehichapụ ya maka PPE dịka nkpuchi, uwe mgbokwasị ọgwụ na nhichapụ ahụike. Akụrụngwa akụrụngwa bụkwa nsogbu zuru ụwa ọnụ n'ihi na ọtụtụ mba ndị ọzọ na-agba ọsọ iji mepụta PPE.
Ebe ọ bụ na teknụzụ nke asaa nke ihe ọkụkụ na-eji nhichapụ disinfectant bụ ngwaahịa EPA nke edebanyere aha, ụlọ ọrụ enweghị ike ịgbanye ụzọ ọzọ ozugbo. Kama, ọ kachasị na-elekwasị anya na ịbawanye ikike n'ime usoro ya dị ugbu a, dị ka Barch si kwuo. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe na ụfọdụ ihe nkwakọ ngwaahịa chọrọ dị ka agba okpu yana ike ịkpa ike ka ọ hapụ ngwaahịa ọzọ.
Ọ bụghị ngwaahịa niile na-egbu nje na-eche otu nsogbu ihu. Barch kwuru na Ọgbọ nke asaa amụbawanye ikike maka ọgwụ aerosol site na 400% gaa na 500% site na ịgbakwunye mgbakwunye ndị ọzọ na ndị nrụpụta nke atọ na iru eru maka isi mmalite nke mmepụta. Na mmiri na-asa ákwà, aka na ncha efere na ngwaahịa nlekọta ụmụ nwanyị, ụlọ ọrụ ahụ enweela ike ịlaghachi na ọkwa dị elu nke ọrụ ọrụ ma ọ bụ atụmatụ site na mbido mmalite.
N'aka nke ọzọ, Barch buru amụma na nloghachi nke nhichapu nje ga-abụ "ụzọ dị ogologo karịa maka anyị… n'ezie anyị chere na mmadụ nwere ike iduga anyị na 2021."
Ndị na-emepụta ma anụ ahụ na ngwaahịa ọgwụ na-enyocha coronavirus. E nwere “ọtụtụ anya na Q4,” ka Barch kwuru, ka ụlọ ọrụ na-anwa ịkọwa ma ebili mmiri ga-adị n’ọdịnihu nke Covid-19 nke na-amanye ndị ọzọ ịgbachi ma na-akpali ndị ahịa ịbugo ọzọ. Ma e wezụga ịga n'ihu na-arụpụta, ọ nweghị ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-emepụta nwere ike ime.
N'ileghachi anya n'ihu n'ihu, ndị nrụpụta na-ekwu na nnukwu ọchịchọ maka ngwaahịa nhicha ga-egosi mgbanwe ogologo oge n'àgwà ndị ahịa. Barch nke Ọgbọ nke asaa kwuru na ya chere na ndị mmadụ iji ọgwụ disinfectants ga-adịgide ọbụlagodi na enwere olile anya na mgbochi ọgwụ.
McLeod kwuru, sị: "Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere obi abụọ na ngwaahịa anyị na-arụ dị mkpa maka ndị mmadụ na-enwe obi iru ala n'ụlọ ha, echere m na a zara ajụjụ a."